> Resource > DVD > Sida loo Guba Photos in DVD la-guur iyo Music
Photos waa xusuus qaali ma aha oo kaliya in aad laakiin sidoo kale xubnaha qoyskaaga. Sida markii uu aado, sawirada libdhi laga yaabaa in baxay iyo awoodin in ay dib u soo ceshano noqon. Si looga hor, gubi photos in DVD fikrad aad u fiican loo ilaalin xusuus qoyska waari noqon doonaa.
Maqaalkani waxa uu ku tusi doona sida ay gubaan photos in DVD Muqaal la kala guurka, koobab iyo music si fudud oo dhaqso ah, adigoo isticmaalaya Wondershare DVD Slideshow Builder Deluxe . Waxa kale oo ay bixisaa qaar ka mid ah talooyin ku saabsan sida ay gubaan photos in DVD.
Qaybta 1aad: Sida loo Guba Photos in DVD la-guurka, koobab iyo Music
Qeybta 2: Photo More in DVD Talooyin
Wondershare DVD Slideshow Builder Deluxe kaa caawin karaan inaad si deg deg ah loo abuuro iyo sawiro si DVD gubi. Download version maxkamad free this DVD gaare sawir hore.
Tallaabo 1: Ku dar Photo ama Video Files
In la abaabulo tab, guji "Add Files" badhanka in la furo suuqa kala caleenta ah, ka heli files oo ku soo dhoofsadaan barnaamijka, waxaad jiidi karaan jeedi sawiro ama videos si ay u abaabulaan on storyboard. Riix badhanka ballaariyo si aad u hesho siladda weyn.
Talaabada 2: Customize Photo Muqaal guur
Guud ahaan, saamaynta kala guurka si toos ah galin doonaa inta u dhaxaysa laba photos / videos kasta marka aad soo dhoofsadaan sawirada. Laakiinse adigu waad astaysto kartaa adigoo gujinaya tab shakhsiyeeyo ah, ka dibna jiidi oo hoos u kala guurka ah ka mid ah liiska in thumbnail u dhexeeya labada raaceyso.
Waxa kale oo aad awoodi kartaa in aad ku darto music soo jeeda halkan: riix badhanka Music iyo dooran file music ka your computer.
Talaabada 3: Dooro DVD Menu
Hadda beddelaan si ay u abuuraan tab qorayaasha menu DVD ka template ah oo ayan u hurin si disc DVD si deg deg ah :
Dhinaca gacanta midig ee shaashada, click double ku hammin template menu si aad u dalbato template DVD menu ah.
Riix badhanka Edit ku hoos daaqadaha Xiisaha ay u astaysto aad DVD menu ama xaq guji menu badan fursadaha.
Waxa kale oo aad samayn kartaa menu xirfadle DVD isticmaalaya foom oo menu DVD firfircoon.
BTW, haddii aadan rabin DVD menu ah, oo kaliya, calaamadi sanduuqa "Disable DVD Menu" doorasho.
Talaabada 4: Gubashada Photos in DVD cajalid
Hadda riix badhanka kulanka xiisaha leh ee suuqa kala Falanqeynta ka hooseeya si ay u hubiyaan DVD slideshow sawirka waa wixii aad rabto. Dib u tag shakhsiyeeyo tab in la beddelo haddii loo baahdo. Ka dib markii in, guji "Guba" badhanka si ay u bilaabaan inay DVD gubasho aad DVD slideshow.
Waxa kale oo aad sawirka soo saarka karaa slideshow si uu u daawado ee Youtube , Mobile Phone, iPhone, PSP, iwm iyada oo fursado bidixda. Hoos waxaa ku qoran tilmaamaha ay gubaan DVD u fiirinaya TV:
Gali DVD disc maran, oo samayn socda.
Guji "Guba si DVD". Markaas sheeg inta koobi DVD. Waxa kale oo aad dooran kartaa in ay curiyaan files Image ISO ama DVD fayl.
Hubi Pal ama goobaha NTSC TV Standard waa xaq. Haddii aanad garanayn oo caadiga ah waxaa loo isticmaalaa in aad dalka, riix "Help" button. Qalad heerka TV keeni lahaa dhibaatada incompatibility loo maqli karo.
Markaas riix "Start" si ay u gubaan DVD slideshow. Haddii aad ka hubisay Abuur DVD Folder iyo / ama la abuuro fursado Image File DVD, faylasha u dhiganta sidoo kale waxaa loo sameynayaa si folder cayimay.
Haatan fadhiisan oo aad nasato, marka gubanaya dhamaystiran, geliso DVD ah disc abuuray galay DVD ciyaaryahan si aad u daawato DVD sawir slideshow on TV.
Dheeraad ah ka baro: User Guide of DVD Slideshow Builder Deluxe
More ku saabsan NTSC / Pal TV Standard
Maalmahan, waxaa jira saddex qaabab video adduunka oo dhan. Laakiin mid kasta waa in aynan dadka kale. Tusaale ahaan, NTSC waxaa loo isticmaalaa in North America, Kanada iyo Japan, halka inta badan gobolada kale ee Pal / SECAM. Si aad u codsato TV Standard ee DVD Slideshow Builder Deluxe , u tag " Abuur " Xulashada tab oo la helo doorasho Standard TV in ay doortaan NTSC ama Pal. Haddii aadan hubin in aad doorato mid ka mid ah, fadlan guji "Help" button, xulo dalka, ka dibna riix "OK", barnaamijka dooran doonaa heerka TV kugu habboon.
Guba Photos in DVD / CD disc 'Data
Haddii aad rabto in aad ku shido oo keliya sawirka si DVD ah ee gurmad iyo isticmaalka dheeraad ah, kaliya aad u baahan tahay sawir gubanaya si software DVD sida ImgBurn (Free) ama Nero (ganacsi). Kuwani software kaa caawinaysaa in aad ku gubi dhan files warbaahinta dhijitaalka ah in DVD, dabcan aad si DVD gubi karaa photos u gurmad ujeedada. Fiiro u yeelo in qaar ka mid ah DVD sawir gaare kuu ogolaanaya in aad ku gubi slideshow iyo sidoo kale sawiro asalka ah. Habkan, oo aad noqon photos in DVD slideshow la kala guurka, iyo waqti isku mid ah, sawiro gurmad si DVD isticmaalka waxyaabo kale.
Sawirka Photos in DVD - Digitize Photos
Haddii aad isticmaasho camera dhaqanka oo ay ugu rarataan culaysyo helay sawirro in album, aad sawiro in computer scan karaa si loogu badalo sawirka si qaab digital. Intaa ka dib, aad wax dheeraad ah ka heli kartaa sawiro digital, sida sawiro gurmad si DVD , u soo dir dadka kale sida DVD hadiyad, sameeyo sawir DVD show ah inuu ciyaaro TV, iwm kuwaas oo dhammu waxay la qaban karo la sawirkaaga jecel DVD gaare software. Haddaba bal fiiriya sida inay u beddesho aad sawiro daabacay in marka hore digital:
Dooro ah scanner sawir wanaagsan Diyaari sawiro aad u iskaan bilow iskaanka sawir Dheellitir sawiro la marsiiyey
Iskaanka photos daabacay in computer ma aha shaqo fudud. Waxa loo baahan yahay samir iyo qaar ka mid ah Talooyin iyo tabaha. Sida aad la socotaanba, shirkadaha qaarkood waxay bixiyaan adeeg iskaanka sawir. Wixii Tallaabada 4, waxa kale oo aad qabsato karaa sawirrada dhijitaalka ah in aad soo xulay DVD sawir gaare . Si kastaba, aad u baahan tahay si aad u hesho sawiro digital diyaar ka hor inta aadan gubi photos in DVD la kala guurka iyo music.
Sida loo Beddelaan DivX / Xvid in DVD